Magaalada Beled Weeyne oo Gacan ku Haynteeda ay la wareegeenCiidamada Dawladda Federalka Somaliya..
Wararkii u danbeeyay ee naga soo gaaraya magaalada Beled weeyne ee Xarunta Gobolka hiiraan ayaa....
Date: 2011-12-31 10:01:50
Wararkii u danbeeyay ee naga soo gaaraya magaalada Beled weeyne ee Xarunta Gobolka hiiraan ayaa sheegaya in barqanimadii manta Ciidamadii Xarakada Shaba bee hore halka ugu sugnaa ay gebi ahanba halka isaga baxeen.
Dagal qatay ku dhawad Lix Saac oo xiriir ah kaddib aya waxa suurta gal noqotay in Ciidamadii Xarakada Shabaab ee halka ku sugna ay gebi ahanba Faaruqiyaan Magaalada.
Cabdullahi Barre oo ka mid ah Sarakiisha Ciidamada Dawladda oo dagalkas hoggaminaysey aya xaqiijiyay in si buuxda ay gacanta ugu hayaan Magaalada Beled weeyne ee Gobolka Hiiran.
Sarkalkan ka tirsan Ciidamada Dawladda aya sheegay in iminka ay gaareen oo ay ku sugan yihiin Xarunta Degmada isla markana ay ciidamadoodu sugayan ammanka guud ee magalada Beled weeyne.
Wararka aya inta ku daraya in dagalkii manta ka dhacay halka inuu gaystey khasare isugu jira dhimasho iyo dhaawac u badan dhinacyadii dasgaalku u dhaxeeyay.
Inta la xaqiijiyay illaa Toban dhinacyadii dagalku u dhaxeeyay ah aya dagaalkas ku dhimatay halka tiro intaa ka badanina ay ku dhawacmeen.
Dagaalka aya iminka istagay iyadoo dadka magaalada oo aan xiriir la sasmaynayana ay noo sheegeen in dagaalkasi ay ka qayb qaateen Ciidamada Itoobiyanka kuwasoo la sheegey in ay wateen dubbaadka iyo hubka kale ee madaafiicda goobta.
Dadka ku sugan magaalada Beled weeyne ayaa inoo xaqiijiyay in ay arkeen Tangiyada ciidamada Itoobiyaanka oo dhex dulun dulceynaya gudaha magalada Beled weeyne kuwasoo qarkood la sheegay in goor danbe ay magaalada isaga baxeen.
Ciidamada itoobiyaanka ayaa iminka dhufeysyo ka sameystay daafaha magalada iyadoona la arkayo ciidamada dawladda oo dhex maraya gudaha magaalada kuwasoo la sheegay in wax dhibaata ahi aysan u gaysanayn dadka shacabvka iyagoona ugu baqaya in ay xasiloonaadaan oo guryahooda iska joogaan.
Si kastaba malmihii u danbeeyay ayaa waxa ka soo yeeray ciidamada mamulada kala duwan ee Gobolka hiiraan hanjabaadyo ku aadan in ay la wareegi doonaan guud ahaan gobolka gar ahana magalada Beled weeyne oo manta ay u suurta gashay inay la wareegaan.